Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS oo Brussels wada-hadallo kula leh madaxda ururka Midowga Yurub. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS oo Brussels wada-hadallo kula leh madaxda...
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS oo Brussels wada-hadallo kula leh madaxda ururka Midowga Yurub.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliye, Mudane Sadiiq Xirsi Warfaa oo ku sugan magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub ayaa halkaasi kula kulmaya mas’uuliyiin ka tirsan ururka Midowga Yurub.
Wasiir Sadiiq, ayaa ugu horreynba la kulmay madaxa Midowga Yurub ee Bariga-Afrika, Hans Stausbol. Kullanka waxaa si qoto dheer looga hadlay Shaqada, Xuquuqda Shaqaalaha, Daryeelka Bulshada iyo Dib-u-habeeynta Shaqaalaha Rayidka.
“Inta uu kullanka socday waxaan si aad ah u caddeeyay ajandahayaga ,waxaana codsaday in Midowga Yurub door taageerro ku yeesho dadaallada aan ku dooneyno dib u habeynta shaqaalaha iyo shaqo abuurka.” ayuu yiri wasiir Warfaa oo Midowga Yurub ku ammaanay taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Madaxa Midowga Yurub ee Bariga-Afrika, Hans Stausbol – wuxuu muujiyay inta uu kullanka socday sida ururka ugu qanacsanyahay dadaallada socda ee dib u habeynta shaqaalaha iyo Daryeelka Bulshada, wuxuu markaa caddeeyay Midowga Yurub inuu garab taaganyahay qorshaha lagu dhimayo shaqo la’aanta, fursadaha shaqadana ay ku helayaan ‘kuwa ugu muhiimsan’.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, ayaa dadaal ku bixinaya xal u helida shaqo la’aanta iyo daryeelka bulshada,waxaana muddada uu ku suganyahay Brussels uu la kulmi doonaa mas’uuliyiinta Belgium, Midowga Yurub iyo hay’adaha caalamiga ah oo arrimahaa uu kula hadlayo.
Previous articleQM: Nus Malyuun Qof ayaa ku waxyeellowday fatahaadaha ka dhacay Soomaaliya.
Next articleShirka Horumarka Dhallinyarada Soomaaliyeed Oo Muqdisho Ka Furmay
Mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo ka qeyb galay munaasabad xariga looga jarayay xarun waxbarasho
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo maanta magacaabay Wasiirro cusub
Khasaare ka dhashay qarax ka dhacay dalka Sweden